Iisisikazi zaseNtaliyane zeepasta
Ngokutsho kwamaTaliya okwenyaniso, i-pasta ngumsebenzi omkhulu wobugcisa. Kwaye inxalenye ebaluleke kakhulu kwesi sidlo iindidi ezininzi. Siza kwenza i-cruise cruise kwi-Italian sauces! Namhlanje uya kufumanisa ukuba yeyiphi i-sauces yase-Italiya ekhoyo kwi-pasta.
Uhambo oluya kwimbali ye-Italian sauce
Umgcini wezityalo zonke ezidalwa namhlanje kwakunokugqoka utamatisi ngeoli yeoli kunye namaqabunga amaninzi e-basil. Kamva, i-cheese yongezwa apha, kwaye i-sauce ethandwa kakhulu yenziwa kwilizwe lonke. Kuyathakazelisa ukuba i-cheese ihluka ngoxhomekeke kwiintlobo ezikhethiweyo kunye nejografi yabapheki.
Igama linikezwe njani le okanye loo sauce? Wabizwa lo mdwebo ngobugcisa. Nazi ezinye izibonelo: i-sauce kunye neetatayi, i-sauce ye-orange kunye nabanye. Kamva ama-sauces afumana amagama abantu abadumileyo, ababhali babo, njl. Ngokomzekelo, bathi iBhamhamel yaqulunqwa nguMarquis waseLouis de Béchamel.
Iisumpe ezimhlophe zepasta
Ekuqaleni kwekhulu le-XII ihlabathi lafunda ngeMpuma kunye neendidi zayo ezintle ezivumba. Kwaye amaTaliyane ngeli xesha aqala ukusebenzisa i-ginger, i-safron kunye neentyantyambo ze-clove kwiisoso zabo, kamva zongeza ishukela. Kodwa abantu abahluphekayo banamathele kwi-anyanisi, igalikhi kunye ne-broccoli.
Kwi-Renaissance kukho iintlobo ezahlukeneyo zenyama. Bhekisela kuwo, umzekelo, isiphunga esekelwe kwintaka yomrha.
Ukudibanisa igalikhi, isinkwa sesonka kunye namantongomane, yenze umgcini we-pesto sauce. AmaSauces aneentlobo ezinamakha amaninzi nawo ayathandwa.
Ukusuka eMelika ukuya eYurophu kuza utamatisi. Yaye yintoni na? I-Italy iyazibona njengetyhefu. Nangona kunjalo, le ncwadi iphuma kwincwadi ka-Ipolito Cavalcati, eguqula ngokubanzi isimo sezinto: ngoku i-tomato sauces idunyiswa kulo lonke ilizwe. Kwaye ngo-1890 incwadi entsha ngomnye umpheki wongeza ezinye iindidi zale sauces. Ukususela ngeli xesha, kukho iisobho ezidumile njenge-Bolognese, i-sauces neentlanzi. Kwaye ukususela ngo-1900 ukukhangela kwendawo yokutya kwiindawo ezahlukileyo ezahlukileyo.
I-salsa al pomodoro edumileyo yavela ngo-1778, kwaye ngowe-1891 yahlanjululwa kwangoku.
Kwimvelaphi yale sauce, kukho iimbono ezimbini zokujonga. Umntu wokuqala uthi le sauce yenziwe ngabavukuzi okanye abaguquguquli kwiXVIII inkulungwane. Ngokomxholo wesibini, emva kwemfazwe, amaMerika azisa amaqanda kunye nebhekoni e-Italy, kwaye abantu basekuhlaleni basebenza kulo lonke le sauce ngokuqhelekileyo. Igama elithi "carbonate" lithetha ukuba unobumba kunye nale sauce lunokuncedisa nayiphi na umntu.
Kancinci malunga neetali zaseItaliyane
Ngokudibanisa iinxalenye ezincinci zeengulube, i-anyanisi ebisiweyo kunye nobomvu obomvu obomvu, amaTaliyane athola i-samatriya sauce. Namhlanje ubeka utamatisi.
AmaSicili ahluphekayo sele atyumba i-ammudikati-i-anchovy sauce, ioli yeoli kunye neentlanzi.
Ngethuba lethu, kukho ithuba lokuthenga i-sauces ezenziwe ngokulungeleleneyo, kodwa iItali eyoyiyo imbeko.
EmaNtla ungayinambitha i-pasta enee-sauces ezilula, ezihlala ziquka ibhotela kunye noshizi. Emva kokuma e-Piedmont, umzekelo, zama i-pasta nge-mushroom iTarfofo. Kwaye naseVetetto ungadla isanci ngenyama yodada.
Endaweni yaseEmilia Romagna idume ngepuphu ye-Bolognese. Kwaye ku futshane neli lizwe kudlalwa i-spaghetti alla carb kunye namaqanda kunye ne-pancetta (isonka se-ngulube esetyenziwe nge-pepper kunye neziqholo). Eyaziwayo apha i-sauce ye-allematrikyan kwioli yeoli, i-garlic kunye ne-pepper ebomvu.
Kwimimandla yaseMarche, thengisa i-sauces - i-pasta kwiintlanzi, kwaye kwi-Umbria zama inzantyambo nge-tartofo emnyama. Xa u tyelela i-Abruzzo kunye neMolise, yidla i-macaroni kunye nengulube, i-sheep cheese kunye ne-ricotta (kunye nohlobo lweshizi).
Makhe sithethe malunga ne-Italy esemazantsi, eyaziwa ngokuba iisucu ezinzima kakhulu. Ngokomzekelo, e-Apulia i-sauce eyinkimbinkimbi yenziwe nge-turnips. Kwaye emva kokuba ukhanda eCatania, uya kufumana i-sauce kunye netamatati, isitshalo seqanda kunye ne-ricotta.
I-Sicily iyaziwa nge-sauce yayo yesardine. Kwiimimandla esezantsi, i pesto iyanzima. Ukubukeka ngokugqithisileyo i-pasta kunye ne-salmon kunye ne-vodka, kwaye kunye ne-zucchini, i-shrimps, i-mushrooms kunye ne-salsichi (uhlobo lwe-sausage yase-Italy).
Indlela yokukhetha i-sauce "yesokudla" yepasta?
I-pasta ende idinga i-sauce ngobunene. Kodwa ii-macaroons ezimfutshane ezineemingxuma ezinkulu ezidibeneyo kunye neasike ezineziqwenga zenyama, intlanzi, imifuno.
Hlola ipasta ukuze ukwazi ukucwina. Ngoko-ke unomquba okhulayo, i-sauce yamanzi iya kuhambelana, kunye neentlobo ezimfutshane ze-pasta ziya kuncediswa ngamasiki eninzi.
Kubalulekile: i-Macaroni inokuthengwa kwisitoreji, kwaye i-sauces, njengoko sithe satsho, kufuneka silungiselelwe ngokwethu.
Xa ulungiselela ama-sauces asekelwe kwincamati yetamatato, kungcono ukwenza isiseko kwiitamatisi ezitsha, kwaye kungekhona kwintamatato ekulungele.
Ezinye iindidi zeesoso
1. Ioli yeoli i-garlic ecocekileyo yile recipe.
2. Utamatisi kunye ne-basil kunye negalikhi - iresiphi eyaziwayo.
3. Izilwanyana zenyama - ezifanelekileyo kakhulu zokugcina iintlobo zokulondoloza. Ukuba awukwazi ukupheka imihla ngemihla, yenza i-sauce ngaphambili kwaye ugcine iintsuku ezimbalwa efrijini.
4. Iqukethe iintlanzi kunye neesanti zokutya zasemanzini - ukufumana okuthabatha umdla.
Iingxelo: i-sauce ayiyi kwenza kuphela isidlo esihlwabusayo kwaye sinamanzi, kodwa yongeza kuyo iikhalori.
Qaphela, kuba i-salsa ayikho nje i-sauce, kodwa ngumdaniso wesizwe. Ngenxa yesi sizathu, xa uthetha nomntu wasekuhlaleni, unokungaqondi kakuhle.
Nceda uqaphele ukuba i-pasta ayilungisi, kodwa isitya esizimeleyo. Kithina ngesizathu esithile i-macaroni yinto enezongezo kwisitya sokutya.
I-Pasta yintlama yeentlobo ezahlukeneyo ze-pasta.
AmaSauces aso anamanzi kwaye athambile.
Imveliso ye-Organic - iimveliso eziphilayo
Iipropati eziwusizo zenyama ye-crab
I-Vitamin C, izifo ezichaphazelekayo
Unondlo lokutya lomama ongumhlengikazi
I-tea enomdla kakhulu
Imihla yeenwele, ukulwa neentlungu kunye nokuqinisa iinwele
Unokufumana njani umyeni okhuseleyo?
Amaphiko enkukhu, agwebile, ahlambuluke ngebhaya enobuhlungu
Fly by plane ephupha
Ikhekhe "I-Chocolate Pancho"